The Haunting of Sharon Tate - YTV
Home » Daily Show » The Haunting of Sharon Tate
Daily Show, International Movie, Programs September 28, 2020 11:47 am
စက်တင်ဘာ(၂၈) ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် မင်းသမီး Hilary Duff ရဲ့မွေးနေ့မှာ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “The Haunting of Sharon Tate” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကို မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် YTV Channel ကထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်….
? ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ဟာ စိတ္တဇဖြစ်စရာ ကြောက်မက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကြုံရမယ်ဆိုရင် အသက်ဘေးနဲ့နီးလောက်အောင် စိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင် သူမနေရာမှာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့စဉ်းစားကြမလဲ. သူမဘာကြောင့် အကြီးအကျယ် စိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရလဲ…
❓ သူမကိုဘာတွေကနှောင့်ယှက်နေခဲ့လဲ… ဆိုတာကိုတော့“The Haunting of Sharon Tate” ကို YTV Channel နဲ့ အတူတူ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင် ခံစားကြည့်ရအောင်နော်…
? ပြသမည့်ရက် : ၂၈ – ၉ – ၂၀၂၀ (တနင်္လာ)
? ပြန်လည် ပြသမည့်ရက် : ၂၉ – ၉ – ၂၀၂၀ (အင်္ဂါ)
??? YTV Channel ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကို အောက်ပါ Youtube Channel တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်… ???